Rehefa mitodika any amin'ny fanovana ifotony ny indostrian'ny fizahantany dia miomana ny hanao spikes amin'ny fangatahana ny mpiantoka
Home » Lahatsoratra farany farany » Hostpost » Rehefa mitodika any amin'ny fanovana ifotony ny indostrian'ny fizahantany dia miomana ny hanao spikes amin'ny fangatahana ny mpiantoka
Enga anie 24, 2021
Ny indostrian'ny fizahantany dia niova ary niova nandritra ny areti-mifindra coronavirus ary tsy zavatra kely izany raha jerena fa efa niaina fotoan-tsarotra izahay.
Mba hahafahan'ny fizahantany indray dia ilaina ny hahazoana antoka fa mahatsiaro tena ho voaro ny olona raha ny momba ny dia no jerena.
Raha tokony hampihena ny teti-bola hitehirizana vola, ny orinasa dia manambola amin'ny marketing be mba hananganana lanja sy fanentanana amin'ny marika.
Amin'ny ankapobeny, mampatsiahy ny olona ny atao hoe mandeha indray izy ireo.
Ny tena zava-dehibe, ny masoivohon'ny fizahan-tany sy ny mpikirakira fizahan-tany dia manamboatra teboka nomerika mba hahamora ny fanafoanana sy ny famerenanana azy indray. Ireo fikambanana mitarika dia mijanona eo amin'ny laharana voalohany indrindra amin'ny alàlan'ny fitaovana nomerika miaraka amin'ny safidy "tsy mikasika", toy ny teknolojia fandoavam-bola amin'ny finday.
Ny fivoarana sy fizarana vaksinina dia manampy amin'ny fifehezana ny viriosy, saingy misy ny fameperana sasany. Ny tena marina dia hisy fetrany ny fivezivezena ao anaty sy manerana ny sisin-tany. Manamora ny fiatrehana ireo fanovana ny fizahantany eto an-toerana. Etsy an-danin'izany ny governemanta dia miezaka ny hamerina sy hamerina amin'ny laoniny ny sehatra, hiarovana ny asa sy ny orinasa. Araka ny hitantsika, ny indostrian'ny fizahantany dia efa miaina fanovana lehibe, tarihin'ny fanoloran-tena ho lehibe. Satria ny orinasa amin'ny indostrian'ny fizahantany dia maniry ny hanangana vola miditra, ny fanjakana sy ny fanjakana eo an-toerana dia manafatra baiko. Na izany aza, zava-dehibe ny tsy raharahiana ny mety ho trosa.
Ny fahazoana sy fitazonana fiantohana fiantohana mety dia ampahany lehibe amin'ny fizotry ny fitantanana risika
Mitranga ny krizy rehefa tsy ampoizina, ka tokony hanao izany ny masoivohon'ny fizahan-tany sy ny mpizahatany manana drafitra mafy orina amin'ny toerany izay mametraka ny dingana tokony harahina amin'ny toe-javatra toy izany. Ankoatr'izay, ilaina ny maka fiantohana satria mampihena ny fahasimbana ateraky ny fisehoan-javatra tsy ampoizina izany. Raha toa ny orinasa kely sy ny orinasa tanora tsy dia voarara, miaraka amina orinasa lehibe, dia tantara hafa tanteraka izany. Ny fiantohana dia manome fiarovana ara-bola amin'ireo fatiantoka ateraky ny risika isan-karazany. Miorina amin'ny fifanarahana voasoratra ara-dalàna izany, izay manery ny orinasa fiantohana handrakotra ny vola mitovy amin'izany. Raha tsorina izany dia afindra amin'ny antoko fahatelo ny risika ara-bola. Ny mpanjifa dia mandoa premium izay miorina amin'ny lafin-javatra maro samihafa.
Izay orinasa mifototra amin'ny fanomezana torohevitra sy serivisy ho an'ny mpanjifa dia mila fiantohana mba hiarovan-tena amin'ny raharaham-pitsarana amin'izay tsy voafehiny. Ireo mpandraharaha fizahantany dia tsy mila ny karazana vokatra fiantohana rehetra eny an-tsena, na dia zakan'izy ireo aza izy rehetra. Karazana fiantohana iray takiana dia fiantohana ara-barotra amin'ny ankapobeny. Manarona ny fanambarana toy ny ratra amin'ny doka, ratra amin'ny vatana ary fahasimban'ny fananana ary fanitsakitsahana ny zon'ny mpamorona. Ny tompona orinasa dia afaka manangona vola ary misoroka ny fandaniana tsy ilaina raha toa ka mampitaha ny haavon'ny fandrakofana sy ny teny nalaina. Misy tranokala manokana mamela ny mpampiasa mikaroka teny nalaina avy amin'ny indostria sy ny karazana orinasa. Na dia tsy manakana ny loza aza ny fiantohana dia manamora kokoa ny raharaha izany.
Ankoatry ny andraikitra ara-barotra ankapobeny, ny karazana politikam-piantohana mahazatra dia misy fa tsy ferana amin'ny fiantohana azo isaina sy fiantohana trano. Na dia milaza aza ny teo aloha fa miaro ny orinasa raha toa ka tsy mahay manangona vola amin'ny mpanjifa dia manome fanonerana ara-bola ity farany raha voakitika ny firafitra sy ny ao anatiny, toy ny tranga halatra na fahasimbana. Mahaliana tokoa, maro no miantoka fiantohana tena amin'ny fananana toy ny fananana. Midika izany fa voatazona ny risika mifanohitra amin'ny famindrana azy amin'ny alàlan'ny fiantohana. Ny fanapahan-kevitra dia matetika miankina amin'ny tsy fahampian'ny fandrakofana, fa tsy teknika fitantanana risika mety.
Indraindray dia mety ilaina ny mitady torohevitra matihanina mba hanampiana amin'ny famaritana ny fandrakofana mety indrindra. Na dia toa tsy toa izany aza, ny fiantohana dia raharaha sarotra ary misy safidy maromaro tokony harahina. Raha tsy manana ny haavon'ny fandrakofana mety ny orinasa, dia mety hiatrika fandaniana be dia be aorian'ny fitakiana. Orinasa maro aza no niafara tamin'ny fanidiana ny varavarany mandrakizay. Mety hitranga amin'ny olon-drehetra ny krizy amin'ny fotoana rehetra. Na ireo matihanina tsara indrindra aza tsy afaka maminavina izay hitranga amin'ny dia iray. Raha tsy faly ny mpanjifa dia tsy hisalasala izy ireo hitory.
IATA dia mandefa ny vondrona Mobility Aids Action Group